Idizayini enhle kakhulu kuhlangene elikhiqizayo kakhulu hardware Kusinikeza nethuba lokucabangela amadivayisi ingxenye yentengo naphakathi ububanzi omunye ezikhanga kakhulu izipesheli Lenovo k3 Note. Buyekeza ngayinye umnikazi smartphone inike amazinga ayo kumnandi ukusebenza ngoba alolu idivayisi. Kumayelana ongakhetha yakhe, izinzuzo nezingozi ngizoya kuso.
Inani, izici nezici isibaluli izinqumo ezingeni phakathi le Lenovo le k3 le Note. Buyekeza umnikazi wanoma iyiphi ezinjalo "smart" Ifoni kubonisa ukuthi le divayisi cishe neze kunabayeni nasezinganeni izixazululo iwuhlelo. Ngakho-ke, model of the smartphone isixazululo esingcono kulabo abasesimweni imali kuqhathaniswa nesizotha udinga isixazululo kakhulu, beyithela khulu lapho. Lokho sinjalo "k3 Nout".
Design kanye Umbuso amadivayisi
Iningi phambi iphaneli usesikhundleni black screen (idayagonali alinganayo yayo okuqinile 5.5 amayintshi) evikelwe enamathela oleophobic ukuba Lenovo k3 Note. khumbula cishe noma yimuphi umnikazi smartphone inike kukhwalithi ephezulu. Ngaphansi isibonisi isuselwe, njengoba kulindeleke, control panel izinkinobho 3 ekhanyayo. Ngenhla kwesikrini kukhona izinzwa, yesifakwandlebeni kanye phambi kwekhamera. Mechanical zokulawula ngokukhalipha babeqoqana kwi emaphethelweni kwesokunxele we-smartphone. Ngasohlangothini layo elingenhla ukuboniswa port umsindo. "MikroYuSB" ezansi itholakala. Eceleni kuba imakhrofoni Elementary. ikhava engemuva, ngokungafani phambi iphaneli kungenziwa ekhiqizwa ezahlukene umbala ezahlukeneyo: abamhlophe, abansundu, blue, ophuzi kanye oluhlaza. It umkhankaso loud speaker, ikhamera main futhi izibani zalo ezimbili LED.
Kolunye ukuyedlula processor izixazululo eyakhelwe umakhalekhukhwini le Lenovo le k3 le Note. Izibuyekezo abanikazi secrete amazinga aphezulu ukusebenza MT6752 (lokhu CPU imodeli at inhliziyo igajethi). Siqukethe eziyisishiyagalombili amayunithi yezamakhompyutha A53 izakhiwo lapho, uma kunesidingo, kungenziwa ahlakazekile ukuba umxhwele 1.7 GHz. Ngenxa yalokho, impela kancane ne isikhundla MT6752 ukusebenza ilahlekelwa "Snapdragon 801". Amathuba CPU unezela ihluzo namafutha "Mali-T760." Lokhu ihluzo namafutha ngaphandle kwezinkinga ekucubunguleni isithombe ukuboniswa isibonisi in the "Eich Di Okugcwele" -quality. RAM kule smartphone 2 GB, futhi firmware isitoreji umthamo 16 GB. Uma kudingekile, inani esakhelwe inkumbulo zingandiswa ngokubeka ifleshikhadi umthamo esiphezulu 32 GB.
Ikhamera enkulu inama khona inzwa 13 MN. ikhwalithi yesithombe etholwe nalo, esihle ngempela, ngisho abasebenzisi afune izinto ngenkani kwabanye kuphakamisa akukho ukuphikisa. Isiqophi iyakwazi nokuba mbaxa ukuqoshwa 1080 k. Phambi inzwa ikhamera nesizotha more - 5 megapixel. Ukuze selfie nokushaya kwevidiyo nge "Skype" kwanele. Umthamo we ibhethri okuphelele 3000 mah ibhetri. Isikhathi isilinganiso usebenzisa igajethi ngokushaja kuzoba esanele usuku. Ekuqaleni bafuna ukunyuselwa amaholo amathoyizi smartphone ecacisiwe ukubaluleka kuzoncishiswa amahora 9-12. Kodwa ngesikhathi umnotho omkhulu kunayo yonke, lokhu smartphone kungaba welule izinsuku 3, kodwa izinga ukusebenza yayo kuyoba esincane.
Omunye zakamuva kakhulu OS zamadivayisi eselula esetshenziswa Lenovo k3 Note. Izibuyekezo abathengi ukuhlukanisa khona "i-Android 5.0". Interface OS kakhulu kabusha program Chinese. imenyu Hlukanisa software efakwe singanikezwanga, amalebula zonke
izinhlelo iyafakeka okufakiwe ngqo omunye amatafula.
uhlelo lokusebenza efakwe phezu superstructure we "Lenovo Lauchera", okuvumela umsebenzisi ngaphandle nzima kakhulu ukushintsha esibonakalayo kohlelo izidingo zabo ethize.
Izibuyekezo futhi intengo
Cishe ephelele waphenduka Lenovo k3 Note. Izibuyekezo Gadget futhi intengo iphuzu yokuthi izimbangi zayo abanawo ithuba. processor enamandla kanye ihluzo namafutha, inkumbulo obunamandla, isikrini esihle, eliphezulu okuyinhloko kanye ikhamera ebheke phambili, inguqulo yakamuva ye-software uhlelo - akusiyo uhlu oluphelele izinzuzo zaleli imodeli smartphone. Ngaphansi kahle ke kusala owodwa - lena umthamo encane ibhethri 3,000 mah. Ukuze uxazulule le nkinga, sebenzisa enye yezindlela ezimbili ezilandelayo. Omunye wabo - ukunciphisa umthwalo kudivayisi bese ugcine ukuphila kwebhetri. Owesibili - ukuxhuma ibhethri yangaphandle (ke kuyodingeka ukuthenga iyodwa).
Manje izindleko thuluzi ilingana dollar 150. Sikhishwe hardware izici namakhono zedivayisi elingangena ngokuphepha bathi lokhu ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu iziphakamiso ingxenye Smartphones Midrange. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, umehluko phakathi devaysa iwuhlelo futhi "k3 Nout" akuyona eqinile ngakho. Ngo iningi isofthiwe ekhona kuze kube manje, akulula kanjalo futhi siphawule. Intengo yale smartphone babe nesizotha ngempela.
smartphone Excellent omuhle kakhulu hardware Ukucaciswa futhi izindleko nesizotha - kungcono Lenovo k3 Note. Bukeza zonke yomnikazi ubonisa ukuthi kule divayisi ayinakho amaphutha abalulekile, kodwa zako angafakwa ohlwini isikhathi eside.
"Interskol" (ukufakwa kokumqoka kuphela): ukubuyekezwa. "Interskol" - amandla
I kokudilika Wall. Unyaka lo UDonga LwaseBerlin lwawa
"Voivod" (rocket): izici i missile InterContinental ballistic